၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ ( ၁၈ ) ရက်
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်သည် ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာထွန်းနိုင်၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတင်မောင်ဦး၊ ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါလျက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၇ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၌ တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများနှင့်တွေ့ဆုံ၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် သွားမည့် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ကဏ္ဍဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်က မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနမှ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ကဏ္ဍမှ အထောက်အပံ့ပြုနိုင်မည့် ကိစ္စရပ်များကို အကြံပြုတင်ပြနိုင်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စွမ်းအင်ဖူလုံရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေရေးအတွက် ရေနံလက်ယက်တွင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိပါကြောင်း၊ အဆိုပါလုပ်ငန်းများအတွက် ဥပဒေများပြဌာန်းပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ သတ်မှတ်ဥပဒေများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ရေနံလက်ယက်တွင်းလုပ်ငန်းကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊ တရားဝင်လုပ်ငန်းများအဖြစ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့်ဒေသအတွက် အကျိုးရှိသလို လုပ်ငန်းရှင်များ အတွက်လည်း အကျိုးရှိမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လက်ယက်တွင်းများမှထွက်ရှိသောရေနံစိမ်းများကို ဒေသတွင်းမှာပင်စနစ်တကျ ချက်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်အသေးစားရေနံချက်စက်ရုံများတည်ဆောက်၍ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက် ခွင့်ပြုရေး စီမံလျက်ရှိပါကြောင်း၊ အလားတူဒေသအတွင်း ရေနံထွက်ပစ္စည်းများဖြန့်ဖြူးရေးတွင် ပြည်သူများအဆင်ပြေချောမွေ့စွာဝယ်ယူနိုင်ရန် ကျေးရွာသုံးစက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်များကိုလည်း လိုင်စင်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးနိုင်ရေး စီမံလျက်ရှိပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ မကြာမီကာလအတွင်း ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းများကဏ္ဍတွင် တိုးတက်မှုများရှိလာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍတွင်လည်း မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့မိုဖြန့်ဖြူးနိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ထိ စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အမျိုးမျိုးမှ ၇၄၆ မဂ္ဂါဝပ် ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နှစ်စမှ မေလအထိ ၃၅၃ မဂ္ဂါဝပ်ရှိသော သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအသစ်များကို ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ယခင် အိမ်သုံးမီတာတစ်မျိုးတစ်စားတည်းကိုသာ အသုံးပြုခဲ့ရာမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလဆန်းမှစ၍ မီတာ (၄) မျိုး စနစ်ကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပြည်သူလူထု မှလည်း မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာ မီတာများကို ရွေးချယ်သုံးစွဲပိုင်ခွင့်ရှိလာခဲ့ပါကြောင်း၊ ၃နှစ် တာကာလအတွင်း မြို့ပေါင်း ၆၈ မြို့၊ ရွာပေါင်း ၅၁၉၁ ရွာအား ၂၄ နာရီ မီးသုံးစွဲ နိုင်အောင် ပိုမိုတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့သည့်အတွက်၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် မီးသုံးစွဲသူ ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိခဲ့ရာမှ ယခုအခါ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ထို့အပြင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် တစ်နိုင်ငံလုံး၏ မီးသုံးစွဲနိုင်မှု ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းပြည့်မီအောင် စီမံ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် မီးရရှိသုံးစွဲပြီးသူများအား တည်ငြိမ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနေသကဲ့သို့ မီးသုံးစွဲမှုမရသေးသူများအတွက်လည်း မျှတအောင်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း၊ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်မှုများအား ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး၏ မီးသုံးစွဲနိုင်မှု ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းသို့လည်းကောင်း၊ ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသို့လည်းကောင်း၊ ၂၀၃၀ခုနှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးရာခိုင်နှုန်းပြည့် လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲ နိုင်အောင် စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ပြည်သူများ အနေဖြင့် ပြီးခဲ့သည့် ၂ နှစ်တာကာလအတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုသလောက် အရည်အသွေးရှိရှိ စိတ်ချလက်ချအခြေအနေသို့ ရောက်ခဲ့သဖြင့် အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို သိသိသာသာ ပိုမို သုံးစွဲခဲ့ကြရာ လေအေးပေးစက်များသုံးစွဲမှု ထူးထူးခြားခြားတိုးတက်လာခဲ့ပါကြောင်း၊ လက်ရှိ အခြေအနေတွင်လည်း ရာသီဥတုထူးခြားစွာ ပူပြင်းမှုများအရ လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲနိုင်မှုကို ကာမိ စေရန် စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း အထက်ဖော်ပြပါအချက်များကြောင့် ယခင်မျှော်မှန်းသည်ထက် သုံးစွဲမှုပိုမိုများပြားလာသည့်အတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလအထိ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ထပ်မံဓာတ်အား လိုအပ်ချက်မှာ ၄၀၀ မဂ္ဂါဝပ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှု များအရ ၆၈၈ မဂ္ဂါဝပ်တိုးတက်သုံးစွဲလာမည့်အပြင် ယခုနှစ်သုံးစွဲမှုကဲ့သို့ တိုးတက်လာပါက ပြည်သူလူထုသုံးစွဲ နိုင်ရန် အရန်ဓာတ်အားပမာဏ ၅၀၀ မဂ္ဂါဝပ် ထားရှိရမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် စုစုပေါင်းဓာတ်အားလိုအပ်ချက်မှာ ၁၅၈၈ မဂ္ဂါဝပ်ခန့် လိုအပ်လာမည်ဖြစ်သည့်အတွက်၊ ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းတွင်လည်း လိုအပ်ချက်ကို အချိန်တိုအတွင်းပြည့်မီစေရန် စီမံဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုက တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ကဏ္ဍဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ငန်းအစီ အစဉ်များအပေါ် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ဌာနကြီးမှူးများက မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးမည့် လုပ်ငန်းအစီအမံများအား Power Point များဖြင့် ရှင်းလင်း တင်ပြကြပါသည်။
ထို့နောက် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး သယံဇာတ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ဝန်ကြီး ဦးမြင့်ဇော်မှ ကျေးလက်မီးလင်းရေးကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာထွန်းနိုင်မှ ဖြည့်စွက် ရှင်းလင်း တင်ပြ ပါသည်။ တင်ပြမှုများအပေါ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက လိုအပ်သည်များအား ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၈ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် မင်းဘူးမြို့နယ်ရှိ မင်းဘူးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ စီမံကိန်းသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာ စီမံကိန်းရှင်းလင်းဆောင်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးခင်မောင်ဝင်းနှင့် Green Earth Power (Myanmar) Co.,Ltd. ၏ တာဝန်ရှိသူတို့မှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတို့အား ရှင်းလင်း တင်ပြကြရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ လိုအပ်သည်များလမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပြီး ဓာတ်အားပေး စက်ရုံစီမံကိန်းအတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
မင်းဘူးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံစီမံကိန်းသည် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး မင်းဘူးမြို့နယ် မင်းဘူးမြို့၏ အနောက်တောင်ဘက် ၁၆.၃ မိုင်ခန့်အကွာ မင်းဘူး- အမ်း ကားလမ်းဘေးတွင်တည်ရှိပြီး Green Earth Power (Myanmar) Co.,Ltd. မှ B.O.T စနစ်ဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စတင်အကောင်အထည်ဖော် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး စက်တပ်ဆင်အင်အား ၁၇၀ မဂ္ဂါဝပ်ဖြင့် စီမံကိန်းကို အဆင့် ၄ ဆင့်ဖြင့် တည်ဆောက် သွားမည်ဖြစ်ကာ ပထမအဆင့်မှ တတိယအဆင့်အထိ ၄၀ မဂ္ဂါဝပ်စီ အသီးသီးတည်ဆောက် သွားမည်ဖြစ်ပြီး စတုတ္ထအဆင့်ကို ၅၀ မဂ္ဂါဝပ်ဖြင့် တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုတည်ဆောက်မည့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံစီမံကိန်းသည် မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး စတင်အကောင်အထည်ဖော် တည်ဆောက်သည့်စီမံကိန်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ပထမအဆင့် ၄၀ မဂ္ဂါဝပ်စီမံကိန်းမှာ ၉၂ ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပြီး မကြာမီ ကာလအတွင်းတွင် ၂၀ မဂ္ဂါဝပ် စတင်ထုတ်လုပ်ပြီး နိုင်ငံတော်ဓာတ်အားစနစ်သို့ချိတ်ဆက်၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။